Gantaallo lagu garaacay caasimadda gobolka Amxaarada - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Gantaallo lagu garaacay caasimadda gobolka Amxaarada
Gantaallo lagu garaacay caasimadda gobolka Amxaarada
Wararka ka imaanayo dalka Itoobiya waxay sheegayaan in xaley gantaallo lagu garaacay caasimadda gobolka Amxaarada ee Bahirdar xilli uu dagaal ka socda gobolka Tigray,sida ay ku warrantay warbaahinta gobolka Amxaarada.
Waa markii labaad oo gantaallo lala beegsado Bahirdar tan iyo markii labo toddobaad ka hor ay dagaallada ka qarxeen Tigray.
Warbaahinta gobolka waxay ku warrantay in gantaallada ay soo tureen dagaalyahanada TPLF inkasta oo warkaas aan si madaxbanaan loo xaqiijin karin.
Waxaana lagu soo warramayaa in gantaallada aysan wax khasaare ah ka geysanin magaalada.
Previous articleSAWIRO:-Soo dhaweynta Musharax Madaxweyne Daahir Geelle oo ka socota Muqdisho
Next articleKiisaska Coronavirus ee Dalka Hindiya oo kor u dhaaftay 9 milyan